I-Scenic Seaside Villa w/7 IiBdrms eziphangaleleyo kunye ne-batchden - I-Airbnb
I-Scenic Seaside Villa w/7 IiBdrms eziphangaleleyo kunye ne-batchden
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguGillian
I-Villa Mirage itshata ubunewunewu kunye nokusebenza kunye ne-wicker kunye ne-accents yomthi efudumeza izinto, isenza iindawo zayo zokuhlala ezininzi zivakale njengekhaya. Iqula lingundoqo kuzo zonke iindawo, livumela abazali ukuba baphumle kodwa babe luncedo ekongameleni abadada abancinci.
Amagumbi okulala asixhenxe abanzi onke eza neendawo zawo zokuhlambela zabucala.
IVilla Mirage iguquguquka kakhulu kwaye ilungile kumaqela amakhulu okanye amancinci aneendawo ezahlukeneyo kunye neemfuno zabucala.
Amagumbi okulala asixhenxe abanzi onke eza neendawo zawo zokuhlambela zabucala kunye nezahlukeneyo ezimangalisayo. Onke amagumbi okulala amahlanu kwi-villa ephezulu aphumela kwiibhalkhoni ezinombono ophefumlayo woLwandle lweCaribbean. Kukho amagumbi amabini okulala kumgangatho ongaphantsi, enye iyindawo yayo yokuziphekela ngokugqibeleleyo enekhitshi lesibini eligcweleyo kunye nomnyango owahlukileyo olungele naluphi na uhlobo lomsitho oqhubekayo. Kufuphi nequla elinolonwabo olwakhelwe ngaphakathi, igumbi elingaphantsi likwayindawo epholileyo kwisizukulwana esincinci esinokubalekela kuso. IVilla Mirage iguquguquka kakhulu kwaye ilungile kumaqela amakhulu okanye amancinci aneendawo ezahlukeneyo kunye neemfuno zabucala.
Ukhetho lokubamba umtshato okanye omnye umbhiyozo lunikiwe, nendawo yokuhlalisa ukuya kuthi ga kwi-38 yabantu, kunye neevillas ezi-2 ezingabamelwane ezilungele iindwendwe ezingaphezulu. Kukho ubuninzi babantu abangama-80 bomda wokuzimasa iindwendwe ngosuku lombhiyozo.
Le villa ibekwe eTurtle Beach, ekwabizwa ngokuba yiCourland Bay. Ixesha lokuzalela ufudo lwesikhumba ukusuka kuMatshi ukuya kuAgasti. Olu lwandle lude, olunesanti emnyama lulungele ukuqubha, ukuhlamba ilanga kunye nemidlalo yamanzi.
Kwelinye icala lebhayi yiFort Bennett. IFort yakhiwa ngamaDatshi phakathi kuka-1628 kunye no-1636. Igazebo encinci ibonelela ngekhusi kunye nombono wepanoramic weStonehaven Bay.
Umbuki zindwendwe ngu- Gillian
Ndinika iindwendwe zam indawo kodwa ndiyafumaneka xa zifuneka ukuze ndinike uncedo ngalo lonke ixesha lokuhlala kwazo.
Elinye leqela lethu liza kulinda kwi-villa ukuze linikeze izitshixo, kwaye likunike ukhenketho olukhawulezayo lwale ndawo. Ukuba andikwazi ukwenza le ntlanganiso yokuqala kunye nokubulisa, ndiyavuya ukuza kukwamkela buqu ngosuku olulandelayo, ukwazisa kunye nokuphendula nayiphi na imibuzo onokuthi usenayo malunga nendawo.
Elinye leqela lethu liza kulinda kwi-villa ukuze l…